လူငယ်တွေ အောင်မြင်ဖို့ (၄) - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / လူငယ်တွေ အောင်မြင်ဖို့ (၄)
မိမိအမည် (Brand) ကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ပါ
ယခင်တစ်ပတ် လူငယ်တွေအောင်မြင်ဖို့ အပိုင်း (၃) တွင် မိမိအရည်အချင်းကို စတင်မိတ်ဆက်ရာတွင် လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ အဆိုပါ အရည်အချင်းတွေ တနည်းပြောရင် ကိုယ့်ရဲ့အမည် (Brand) ကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့၊ လောကကြီးနဲ့ စတင် မိတ်ဆက်ပေးပြီး တဲ့အခါ ရပ်တန့်မထားပဲ ကိုယ့်ရဲ့အမည်(Brand)ကို ပိုမိုနေရာ ရစေဖို့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရပါမယ်။ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုအနေနဲ့ ဥပမာ ပြောရရင် စက်ရုံက ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ပြီးတဲ့အခါ သုံးစွဲသူတွေနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်စေဖို့ Marketing လုပ်ရသလိုပါပဲ လူတစ်ယောက် ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း/ အရည်အသွေး တနည်းပြောရရင် ကိုယ့်အမည်(Brand)ကို ကိုယ့်ရဲ့ဆက်စပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်က သူတွေနဲ့ ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် သိနေဖို့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တော်တော်များများမှာ ကိုယ်က နေရာရအောင် ကိုယ်ရဲ့ အရည်အချင်းကို အခြေခံပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရတာပါပဲ။ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တစ်ခုကို စတင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အရည်အချင်း/ အရည်အသွေးကို ပတ်ဝန်းကျင် တနည်းပြောရင် ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်က အသိအမှတ်ပြုအောင် ကြိုးစားရသလို အသိအမှတ်ပြု လာတဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့ အမည် (Brand) ကို ပတ်ဝန်းကျင်/လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပိုပြီးနီးကပ်လာအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တဲ့အခါ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးစွဲသူကို ဆွဲဆောင်ကြသလို ကိုယ်ရဲ့အမည်(Brand)ကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တဲ့အခါလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အားသားချက် တစ်ခုခုကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးပြီး ဈေးကွကို ချဲ့ထွင်ရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်က ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ အားသာချက်ရှိလဲ? လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာ၊ စည်းကမ်းရှိတာ၊ စနစ်တကျ လုပ်တတ်တာ၊ အချိန်တိကျတာ အစရှိတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်(Brand)ကို တန်ဖိုးတစ်ခုရလာမှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အစားအသောက်စားဖို့ ဆိုင်တစ်ခုကို ရွေးကြတဲ့အခါ တစ်ချို့က အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကိုရွေးကြတယ်၊ တစ်ချို့က ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်တဲ့ဆိုင်ကို ရွေးကြတယ်၊ တစ်ချို့က မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရနိုင်တဲ့ဆိုင်ကို ရွေးကြတယ်၊ တစ်ချို့က ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ဆိုင်ကိုရွေးကြတယ် စသည်စသည်ဖြင့် သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ အားသာချက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်ညီတာကို၊ နှစ်သစ်တာကို စားသုံးသူက ရွေးချယ်တာပါပဲ။
ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်ကြတဲ့အခါ ကြေငြာ (Advertisement) ကလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေငြာဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါ စာဖတ်သူက ကိုယ့်ကိုကို ကြေငြာရမယ်ဆိုတော့ တစ်မျိုးတမည် စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိကောင်း ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေငြာတာကလည်း အောင်မြင်မှုအတွက် အသုံးပြုရမဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကြေငြာကြမလဲ? ဒီနေ့ခေတ်မှာ Self Advertising အတွက် social network တွေဟာ အသုံးဝင်တဲ့နေရာတစ်ခု တနည်းပြောရင် tool တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ Professional Skill အပါအဝင် ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုခုကို ထုတ်ဖော် ကြေငြာဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် facebook ကို Self Advertising အတွက် ကောင်းကောင်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက် ကတည်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ Professional Skill ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လေ့လာနည်း၊ ဝေါဟာရ၊ အီဒီယမ်၊ အသုံးအနှုန်း၊ သင်ခန်းစာ၊ ဆောင်းပါး စတာတွေကို အခြေပြုပြီး နောက်ျထပ် ပညာရေးဆိုင်ရာ၊ လူငယ်ရေးရာ၊ ဘဝအောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာတွေကို တစိုက်မတ်မတ်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်သာ ကုန်သွားပါတယ်၊ အသိအမှတ်ပြုတဲ့သူ သိပ်မများပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ် နှစ်လယ် လောက် ကစပြီး ပရိတ်သတ်စရလာပါတယ်။ အခု ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာ ရနေပါပြီ၊ ဒါဟာ Self Advertising ပါပဲ၊ နောက်တစ်ယောက် အနေနေနဲ့ ပြောရရင် အားလုံးသိကြတဲ့ နိုင်းနိုင်းစနေပါ၊ Blogger တစ်ယောက်ကနေ Professional Writer တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် အွန်လိုင်းကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပမာတွေ အများကြီးပေါ့ဗျာ …၊ ဒီနေရာမှာ အလျင်းသင့်လို့ ပြောချင်တာက လူငယ်တွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ အွန်လိုင်းသုံးကြတဲ့အခါ Pleasure သက်သက်အတွက် သုံးတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို ကြေငြာဖို့အတွက် tool တစ်ခုအဖြစ်လည်း သုံးကြစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် Resources တွေအများကြီး ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ယူတတ်ရင် ယူတတ်သလို ရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ Learning Platform အဖြစ်လည်း သုံးကြစေချင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ Brand ကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ Self Advertising လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ကာ ပါဝင်တာလည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဖြစ်စေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ Brand နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်းက ကိုယ်ရဲ့ အယူအဆ၊ သဘောထား၊ ရပ်တည်ချက် တွေကို ကိုယ့်အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင် ထက် ကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာတွေအထိ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေငြာတာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာလည်း ပြောစရာရှိပါတယ်၊ အဲဒီလို ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ပါဝင်တဲ့အခါ ကြေငြာခြင်းနဲ့ မတူအောင် ကြေငြာရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိမိက ဘယ်လိုကျောင်းတွေတက်ပြီး ဘယ်လိုဘွဲ့ ဒီဂရီတွေ ရခဲ့တယ် ဆိုတာတွေထက် ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အယူအဆ၊ သဘောထားကို အကောင်းဆုံး တင်ပြနိုင်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းရင်ကောင်းသလို အသိအမှတ်ပြုလာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါအပြင် အဆက်အသွယ်ကောင်း တွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ အယူအဆ မတူတာတွေ၊ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာ တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မတူညီတာ တွေကို တစ်ဖက်သားကမှားပြီး ကိုယ်ကပဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တယူသန်မလုပ်ပါနဲ့၊ အဲဒီကိစ္စကို ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ အခုပြောခဲ့တဲ့ နည်းတွေအပြင် ဒီထက်မကသော နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ လိုအပ်သလို ဆပွားလေ့လာ ကျင့်သုံး နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
“ လူငယ်တိုင်း စစ်မှန်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင် အောင်မြင် နိုင်ကြပါစေ ......... ”
Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470491083077685:0